Politics Archives » Page 22 of 37 » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Lovejoy Mutongwiza	 Apr 23, 2018
Shorai Murwira	 Apr 19, 2018
Shorai Murwira	 Apr 17, 2018
Pro-Democratic Movements Escalates Anti-Bond Notes Campaign
Shorai Murwira	 Nov 30, 2016
The introduction of bond notes has sparked wide disapproval from pro-democratic movements who expressed concern over government’s disregard of the people’s views against them. In a statement released on Monday, Crisis in Zimbabwe…
War Vets Pays Tribute to Fidel Castro
Shorai Murwira	 Nov 28, 2016
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association has paid tribute to the late Cuban leader, Fidel Castro who died on Saturday at the age of 90, saying he should be respected for the role he played in liberating Southern Africa.…
Staff Reporter	 Nov 24, 2016
Is MDC-T leader Morgan Tsvangirai still fit to Lead?
Staff Reporter	 Nov 22, 2016
The electoral body, Zimbabwe Electoral Commission (ZEC), does not regulate who is supposed to vote come 2018 when Zimbabwe hold the make or break election, regional poll watchdog has said. Think tank and advocacy institution on elections…
I Can Win the 2018 Presidential Elections: Mliswa
Shorai Murwira	 Nov 21, 2016
After his bruising attack on Movement for Democratic Change leader, Morgan Tsvangirai, Norton constituency legislator Temba Mliswa has declared himself ready to take on political parties in the 2018 Presidential elections. Addressing…
ZEC challenged to act against politically motivated violence
Lovejoy Mutongwiza	 Nov 21, 2016
Election Resource Centre has challenged Zimbabwe Election Commission to deal with all reported cases of politically motivated violence as a way of proving its capacity to manage credible elections Zimbabwe. This comes after ZEC failed to…
Is Mutsvangwa the war veteran guru?
Sir Nige	 Nov 20, 2016
Exclusive with Dr Simba Makoni on Zim politics & economy
Staff Reporter	 Nov 20, 2016
Shorai Murwira	 Nov 17, 2016
Zimbabwe National War Veterans Association has distanced itself from the media reports alleging that the former war fighters were claiming gratuities of up to $500,000 from the government. Addressing journalists in Harare on Thursday,…